हरेक विषयमा सहि र गलत पक्षहरु त हुन्छ नै तर कति भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो :मिलन अर्याल - MeroReport
हरेक विषयमा सहि र गलत पक्षहरु त हुन्छ नै तर कति भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो :मिलन अर्याल
बिबिएस तेस्रो वर्षको परिक्षाफलको प्रतिक्षामा रहेका उनलाई संगीत सुन्न र चलचित्र हेर्न एकदमै मनपर्छ । ब्यवस्थापनका विद्यार्थी भए पनि उनको गहिरो रुची भने सुचना प्रविधिमा रहेको छ । यसका अलावा उनलाई फोटोग्राफीमा पनि रुचि छ र यस रुचिलाई आफ्नो ब्लगमा समेट्ने प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छन उनी अर्थात मिलन अर्यालले । मिलनको धेरै समय भने वेब डिजाइन र ब्लगिङमा नै बित्छ । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै मिलन अर्याललाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
मिलन अर्याललाई सोसल मिडियामा के भनेर चिन्ने? बताइदिनुस न ।
सबैजनाले मेरो डिजाईन र लेखन शैली मनपराउनु भएको छ र उहाँहरुले मलाई सृजनशील भन्नुहुन्छ ।
ब्लगिङ गर्न कहिलेलेखि थाल्नुभयो र कसरी शुरु गर्नुभयो ?
मैले एसएलसी पछि अर्थात सन् २०१० तिर मैले सिकाईको रुपमा लेख्न शुरु गरेको हुँ ।
केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ ? कस्ता विषयवस्तु तपाईको रोजाईमा पर्छन ?
म मनोरञ्जनको लागि लेख्नेगर्छु र ति लेखाई मेरो अनुभवमा आधारित हुन्छन् । म डिजाइन, ब्यापार र वेब संस्कृतिका अन्य विषयहरुमा लेख्न रुचाउँछु ।
तपाईले http://www.milanaryal.com/ बाहेक अरु पनि ब्लग चलाउनुहुन्छ ?
मैले http://milanaryal.blogspot.com बाट ब्लगिङ शुरु गरेको हुँ । त्यसमा मैले लेख्न गाह्रो महशुस गरे तर पनि यसको डिजाईन गर्न भने रमाईलो थियो । पछि फेरी मैले http://milanaryal.com शुरु गरे । वहाँ मलाई दुबै कुरा गर्न सक्षम भए । यि भन्दा बाहेक कहिलेकाँहि म http://medium.com/@MilanAryal बाट पनि ब्लगिङ गर्छु ।
टेक्निकल कुराहरु ब्लगमा धेरै छन् तपाईको ब्लगमा, ब्लग हेरेर/पढेर पाठकले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ?
मैले “Google Analytics” बाट आफ्नो ब्लगको ट्रयाक गरेर हेर्दा राष्ट्रिय भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय पाठकहरु धेरै पाएको छु । उहाँहरुले मलाई ईमेल गरेर तथा ट्वीटबाट पनि ब्लग धेरै नै उपयोगी भएको बताउनुभएको छ ।
टेक्निकल ब्लगका पाठक कत्तिको छन् नेपालमा ?
साँच्चै भन्नु पर्दा टेक्निकल ब्लगका पाठकहरु एकदमै कम हुनुहुन्छ । अनि टेक्निकल कुराहरु राखिएका ब्लग पनि कम नै छन् ।
आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न अहिले युवाहरुले ब्लगिङप्रति आर्कषित भईरहेका छन । नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ , सदुपयोग या दुरुपयोग ?
अहिले मैले धेरै चाहिँ के देखिरहेको छु भने मानिसहरु माईक्रो ब्लगिङ्ग जस्तै: ट्वीटरमा नै सक्रिय छन् । प्रायः सबैजना सृजनशील छन् । यद्यपी केही मानिसले छद्म नाम राखेर अकाउट बनाएका छन तर म त यसमा सृजनशीलता नै देख्छु । भविष्यमा पक्कै पनि मानिसहरुले यसलाई सदुपयोग गर्ने छन् भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।
ब्लगिङ वा ब्लगरका लागी आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरापनि उठिरहेको हुन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागी आचारसंहिता ?
हरेक क्षेत्र र ब्यवसायमा अनुशासन जरुरी भए जस्तै ब्लगरहरुले पनि अर्थपूर्ण र अनुशासित ब्लग पोष्ट गर्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ ।
हरेक विषयमा सहि र गलत पक्षहरु त हुन्छ नै, तर कति भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा धेरै सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरु असल नै छन् ।
अवश्य । उनीहरुका ब्लग पढेर हामीले उनीहरुको स्थानिय संस्कृति, स्रोत, साधनका बारे थाहा पाउँछौ । त्यसैले यो एक प्रकारले नागरिक पत्रकारिता पनि हो ।
नेपाली ब्लगर र नागरिक पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरेकोमा मेरो रिपोर्टलाई धेरै धन्यवाद ।
Comment by Amuna Chapagain on December 25, 2014 at 3:41pm